NgoFebhuwari 2019, uMnu Lin Yuanzhong, owayekade eyisisebenzi seChangheng Company, ngeshwa wahlaselwa ngumdlavuza wamaphaphu. Umholi wenkampani wazisa bonke abasebenzi abaseqenjini lenkampani iWeChat futhi wanikela ngokushesha okukhulu. Abasebenzi nabo babambe iqhaza elibonakalayo ekunikeleni nasekubusiseni umyalezo. Kubonisa ukuvumelana nobungani babasebenzi baseChang Heng.
KuMkhosi Wentwasahlobo ka-2020, ukuze kuliwe ne-COVID-2019, i-Changheng Company ithole iziyalezo kuhulumeni ofanele ukuhlela ukuqala kabusha komkhiqizo ngaphambi kwesikhathi. Ngokungekho kwezinsizakusebenza kanye nabasebenzi, uMnu.Ge Bingda, usihlalo wenkampani, usebenze ubusuku nemini edidiyela umkhiqizo. Abasebenzi abakude nabo banqoba ubunzima, bebeka impilo yabo engcupheni, ngokusebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokuhamba, babuyela kokuthunyelwe kwabo.
Inkampani yaseChangheng yanikezwa isihloko sebhizinisi elikhokhela intela eShanghai. Lokhu kungukuqinisekiswa kobuchwepheshe beChangheng, kepha futhi nokubuyela kwabo bonke abasebenzi baseChangheng emphakathini.Ngaphambilini i-8th China (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, imikhiqizo yethu ibonwe ngekhwalithi yomoya wamaShayina nobuciko we ingxoxo nemibiko.
UXu Yingchun, umqondisi weLaboratory Department of Peking Union Medical College Hospital, wathi engxoxweni eyayizophela ekupheleni kuka-2020: “Kwezinye izifunda, imitshina ye-PCR kanye ne-nucleic acid extractors seyikhona, ngisho namalabhorethri e-PCR asehleliwe. Nokho, isihluthulelo ukuqeqesha izisebenzi zobuchwepheshe zesayensi yamangqamuzana ezikwazi ukubhekana nalolu bhubhane. ” Ingabe okubalulekile.